आइतबार अक्टोबर 10, 2021 |
आइतबार अक्टोबर 10, 2021
विषय — के पाप, रोग र मृत्यु साँचो हो?
वर्ण पाठ: स्वर्ण पाठ: हितोपदेश 22 : 6
“"नानीहरूलाई सही जीवन निर्वाह गर्नु सानै बाट सिकाउनु पर्छ, तब त्यो नानी बढे पनि त्यही प्रकारले जीवन यापन् गर्छ।"”
उत्तरदायी पढाइ: भजनसंग्रह 78: 1-7
1 मेरो मानिसहरू, मेरो उपदेशहरू ध्यान दिएर सुन। मैले भनेका कुराहरूमा ध्यान देऊ।
2 म तिमीहरूलाई यो कथा भन्ने छु। म तिमीहरूलाई यो पुरानो कथा भन्ने छु।
3 हामीले ती कथाहरू सुन्यौ, अनि हामी त्यो राम्रो प्रकारले जान्दछौ। हाम्रा पिता-पुर्खाहरूले यी कथाहरू सुनाए।
4 अनि हामी त्यो कथा भुल्ने छैनौं। हाम्रा मानिसहरूले पछि आउने सन्तानहरूलाई त्यो कथाहरू भन्ने नै छन्।हामी मिली परमप्रभुको प्रशंसा गर्नेछौ, अनि उहाँका अचम्म लाग्दा कार्यहरू सबैलाई भन्नेछौं।
5 परमप्रभुले याकूबसँग सम्झौता गर्नुभयो। परमेश्वरले इस्राएल लाई नियम दिनुभयो। परमेश्वरले हाम्रा पिता-पुर्खाहरूलाई आज्ञाहरू दिनुभयो। उहाँले हाम्रा पिता-पुर्खाहरूलाई भन्नुभयो कि ती नियमहरू बारे आफ्ना भावी सन्तानहरूलाई बताऊ।
6 अनि आउने भावि सन्तानहरुले पनि यो नियमको बारेमा जान्नेछन् र तिनीहरु आफ्ना नानीहरुलाई सिकाउन सक्षम हुनेछन्।
7 यसैकारण ती सबै मानिसहरूले परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नेछन्। तिनीहरूले परमेश्वरका कार्यहरू भुल्ने छैनन्। तिनीहरूले परमेशवरको आज्ञानुसार उहाँको नियमहरू पालन गर्नेछन्।
1. व्यवस्था6: 1-3, 6-9
1 आज्ञा, विधि तथा विधानहरू यी नै हुन् जुन परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई सिकाउनुका निम्ति मलाई बताउनु भयो। तिमीहरूले प्रवेश गर्दै गरेको भूमिमा यी विधि-विधानहरू पालन गर।
2. मत्ती4: 23, 24
23 येशूले गालीलका सबै ठाउँहरूमा यात्रा गर्नुभयो। उहाँले तिनीहरूको सभाघरहरूमा सिकाउन लाग्नुभयो अनि स्वर्गको राज्यको बारेमा सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो। उहाँले मानिसहरूमा भएका हरेक किसिमका रोग र शारीरिक कमजोरीहरूलाई निको पार्नुभयो।
24 उहाँको कीर्ति सिरियाभरि फिंजियो, अनि मानिसहरूले शारीरिक रूपले रोगी भएका सबै रोगीहरूलाई उहाँकहाँ ल्याउन थाले। ती रोगी मानिसहरू अनेक प्रकारका रोग र कष्टले पीडित थिए। कतिजना मानिसहरू एकदमै नराम्रा रोगले पीडित थिए भने कतिजना भूत-प्रेत र पिशाच लागेकाहरू थिए। कतिजना छारेरोग लागेकाहरू र कतिजना पक्षवात भएकाहरू थिए। येशूले तिनीहरू सबैलाई निको पार्नुभयो।
3. मत्ती 18 : 2-6
3 अनि भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु। यदि तिमीहरू सानो बालकहरू जस्तै बदलिएनौ भने तिमीहरू स्वर्गको राज्यमा कहिल्यै प्रवेश गर्न सक्नेछैनौ।
5 यदि कुनै मानिसले मेरो नाममा यो बालकलाई ग्रहण गर्छ भने, उसले मलाई ग्रहण गरेको हुनेछ।
6 यदि एउटा सानो बालकले ममाथि विश्वास राख्छ भने, अनि कसैले त्यो बालकलाई पापमा पार्छ भने त्यस मानिसको लागी अति नराम्रो हुनेछ। त्यसको निम्ति त घाँटीमा एउटा ठूलो जाँतो झुण्डयाएर स्वयंलाई अगाध समुद्रमा डुबाइदिनु असल हुनेछ।
4. मत्ती 19 : 13-15
13 त्यसपछि मानिसहरू आफ्ना बाल-बालिकहरूलाई लिएर येशूकहाँ गए ताकि उहाँले तिनीहरू माथि आफ्ना हात राखेर प्रार्थना गरिदिनु भएको चाहन्थ्यो। जब उहाँका चेलाहरूले यो देखे, तिनीहरूले मानिसहरूलाई हप्काएर त्यसो गर्न दिएनन्।
14 तर येशूले भन्नुभयो, स-साना बालकहरूलाई मकहाँ आउन नरोक। किनभने स्वर्गको राज्य यी साना बालकहरू जस्तै मानिसहरूको हो।
15 त्यसपछि तिनीहरूमाथि हात राखेर येशू त्यहाँबाट जानुभयो।
5. लूका 7: 11-15
11 अर्को दिन येशू नाइन भन्ने शहरमा जानुभयो। उहाँका चेलाहरू र धेरै मानिसहरू पनि उहाँ संगै गहरहेका थिए।
12 जब येशू शहरको फाटक नजिक पुग्नु भयो, उनले मुर्दा लगिरहेको देख्नु भयो। एउटी विधवाको एउटै भएको छोरो मरेको थियो। जब लाश लगिरहेको थियो शहरका धेरै मानिसहरू ती विधवासंग थिए।
13 जब प्रभु येशूले तिनलाई देख्नुभयो उहाँ त्यस विधवाको निम्ति हृदयबाट दुःखी हुनु भयो र तिनलाई भन्नुभयो, नरोऊ।
14 येशू शवपेटिकाको नजिक पुग्नु भयो अनि त्यसलाई छुनुभयो। लाश लगिरहेका मलामीहरू टक्क अडिए। उहाँले त्यो मरेको केटोलाई भन्नु भयो, ए युवक म तिमीलाई भन्दछु, उठ।
15 त्यसपछि त्यो मरेको केटो तत्कालै उठेर बस्यो अनि बात गर्न शुरु गर्यो। येशूले त्यस केटोलाई त्यसको आमालाई सुम्पिदिनु भयो।
6. प्रेरित 3: 1-9
4 पत्रुस र यूहन्नाले त्यस लङ्गडो मानिसलाई एकटक लाएर हेरे अनि पत्रुसले भने, हामीलाई हेर!
6 तर पत्रुसले भने, मसंग कुनै सुन अथवा चाँदी छैन, तर मसंग जे छ त्यो तिमीलाई दिनेछु। नासरतको येशू ख्रीष्टको शक्तिले जुरूक्क उठ र हिंड्।
9 सबै मानिसहरूले उसलाई चिने कि त्यो मानिस लङ्गडो थियो र उ प्रत्येक दिन मन्दिरको सुन्दरद्वारको सामु बसेर पैसा माग्दथ्यो। अब तिनीहरूले त्यही मानिसहरूलाई हिंड्दै र प्रभुको स्तुति गाउँदै गरेको देखे।
7. भजनसंग्रह 103: 1-4
1 मेरो आत्मा, परमप्रभुको प्रशंसा गर! प्रत्येक मेरो अङ्गले उहाँको पवित्र नाउँको गुण-गान गर्दछ।
2 हे मेरो आत्मा, परमप्रभुको प्रशंसा गर अनि नबिर्सि कि उहाँ नै वास्तवमा कृपालु हुनुहुन्छ।
3 परमेश्वरले हाम्रा सारा पापहरू क्षमा गरिदिनु हुन्छ। उहाँले हाम्रा सारा रोगहरू निको पारिदिनु हुन्छ।
4 परमेश्वरले चिहानबाट हाम्रो जीवन बचाँउनु हुन्छ अनि हामीलाई उहाँले प्रेम र दया गर्नुहुन्छ।
8. यशैया 54 : 14, 15, 17
17 मानिसहरूले तिम्रो विरूद्ध लडाइँ गर्न हतियारहरू बनाउँनेछन्, तर ती हतियारहरूले तिमीलाई पराजित गर्न सक्दैनन्। केही मानिसहरूले तिम्रो विरूद्ध कुराहरू गर्नेछन्, तर तिनीहरू जो तिम्रो विरूद्ध कुरा गर्छन् आफै दोषी रहेको प्रमाणित गर्नेछन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, परमप्रभुको दासले के पाउनेछ? तिनीहरूले मबाट माफ पाउनेछन्।
पाप, रोग, र मृत्यु सत्य मा कुनै आधार छैन।
ईसाई विज्ञान र ईश्वरीय प्रेम को शक्ति सर्वशक्तिमान छ। यो वास्तव मा पकड नबुझ्ने र रोग, पाप, र मृत्यु नष्ट गर्न को लागी पर्याप्त छ।
क्रिश्चियन विज्ञान भगवान, पाप, रोग, र मृत्यु को लेखक को रूप मा प्रकट गर्दैन, तर ईश्वरीय सिद्धान्त को रूप मा, सर्वोच्च प्राणी, मन, सबै दुष्ट बाट मुक्त। यो सिकाउँछ कि कुरा झुट हो, तथ्य होइन, अस्तित्व को; त्यो तंत्रिका, मस्तिष्क, पेट, फेफड़ों, र यति अगाडि, छ - पदार्थ को रूप मा - कुनै बुद्धि, जीवन, न त अनुभूति।
त्यहाँ कुनै भौतिक विज्ञान छैन, जसरी सबै सत्य ईश्वरीय मन बाट आय। तसर्थ सत्य मानव हैन, र पदार्थ को एक कानून छैन, को लागी पदार्थ एक कानून दिने छैन। विज्ञान ईश्वरीय मन को एक उत्सर्जन हो, र एक्लै भगवान सही व्याख्या गर्न सक्षम छ। यो एक आध्यात्मिक छ, र एक भौतिक मूल छैन। यो एक ईश्वरीय कथन हो, - कम्फर्टर जो सबै सत्य मा नेतृत्व।
पाप र रोग सोच्नु अघि उनीहरु लाई प्रकट गर्न सकिन्छ।
एक आमा सबैभन्दा बलियो शिक्षक हो, या त अपराध को लागी वा बिरुद्ध। उनको विचार अर्को नश्वर दिमाग को भ्रूण को रूप मा, र अनजाने मा मोल्ड, या त आफैलाई वा ईश्वरीय प्रभाव को माध्यम बाट एक मोडेल पछि, "ढाँचा अनुसार तिमीलाई माउन्ट मा देखाइयो।" यसैले क्रिश्चियन विज्ञान को महत्व, जस बाट हामी एक मन को बारे मा जान्दछौं र राम्रो को उपलब्धता को लागी हरेक दुख को लागी उपाय।
आमाबाबुले आफ्नो बच्चाहरु लाई सकेसम्म चाँडो स्वास्थ्य र पवित्रता को सत्यहरु लाई सिकाउनु पर्छ। बच्चाहरु वयस्कहरु को तुलना मा अधिक ट्र्याक्टेबल छन्, र उनीहरु लाई खुसी र राम्रो बनाउन को लागी सरल सत्यता लाई माया गर्न को लागी सजिलै संग जान्दछन्।
येशू साना केटाकेटीहरुलाई माया गर्नुहुन्थ्यो किनकि उनीहरु गलत बाट स्वतन्त्र थिए र उनीहरुको सही को ग्रहणशीलता। जबकि उमेर दुई राय को बीचमा रोकिएको छ वा झूटा विश्वासहरु संग लडिरहेको छ, युवाहरु लाई सत्य को लागी सजिलो र छिटो प्रगति गर्दछ।
एक सानो केटी, जो कहिलेकाहीँ मेरो व्याख्या सुन्नुहुन्थ्यो, उनको औंलामा नराम्रो चोट लाग्यो। उसलाई यो याद छैन जस्तो लाग्यो। यसको बारेमा सोधिएकोमा उनले सहजतापूर्वक जवाफ दिईन्, "त्यहाँ कुनै सनसनी छैन।" हँसिलो आँखाको साथ बन्द गरी, उनले हालै थपे, "आमा, मेरो औंला अलिकती दुखेको छैन।"
यो हुन सक्छ महिना वा बर्ष पहिले उसका आमा बुबाले उनीहरुको लागु औषध छोड्नुहुन्थ्यो, वा मानसिक उचाइमा पुग्यो उनीहरुको सानो छोरी यति स्वाभाविक रूपले प्राप्त भयो। आमाबाबुको अधिक जिद्दी विश्वास र सिद्धान्तहरु अक्सर आफैं र उनीहरुको सन्तान को दिमाग मा राम्रो बीउ गलाउने। अन्धविश्वास, जस्तै "हावाका मुर्खहरु," राम्रो बीउ छर्नु भन्दा पहिले यो छर्छ।
बच्चाहरु लाई सत्य उपचार, क्रिश्चियन विज्ञान, उनीहरुको पहिलो पाठ को बीच मा पढाईनु पर्छ, र रोग को बारे मा सिद्धान्त वा विचारहरु को चर्चा वा मनोरन्जन बाट राखिएको छ। त्रुटि र यसको पीडा को अनुभव को रोकथाम को लागी, तपाइँको बच्चाहरु को दिमाग बाट या त पापी वा रोगग्रस्त विचारहरु बाट बाहिर राख्नुहोस्। उत्तरार्द्ध पहिलेको जस्तै सिद्धान्त मा बहिष्कृत हुनुपर्छ। यो ईसाई विज्ञान चाँडै उपलब्ध बनाउँछ।
केहि अवैधहरु तथ्य जान्न वा पदार्थ को पतन र यसको मानीएको कानून को बारे मा सुन्न को लागी इच्छुक छैनन्। उनीहरु आफ्नो भौतिक देवताहरु लाई अलि अलि लामो समय समर्पित गर्दछन्, जीवन र पदार्थ को बुद्धि मा एक विश्वास संग जोडिएको छ, र यो त्रुटि उनीहरु लाई मात्र जीवित र साँचो भगवान गर्न सक्छन् गर्न को लागी इच्छुक भन्दा बढी गर्न को लागी अपेक्षा गर्दछन्। तपाइँको स्पष्टीकरण मा अधीर, मन को विज्ञान को अनुसन्धान गर्न को लागी इच्छुक छैन जो उनीहरु को उजुरीहरु बाट छुटकारा पाउँछ, उनीहरु झूटा विश्वासहरु लाई अँगालो हाल्छन् र भ्रामक परिणाम भोग्छन्।
परमात्मा विज्ञान भौतिक इन्द्रिय को झूटो गवाही उल्टाउँछ, र यस प्रकार त्रुटि को आधार टाढा आँसु। यसैले विज्ञान र इन्द्रियहरु को बीच दुश्मनी, र सही समझ प्राप्त गर्न को लागी असंभव को भावना को त्रुटिहरु लाई समाप्त गरीन्छ।
ईश्वरले आध्यात्मिक कानूनलाई खारेज गर्नको लागी कहिल्यै भौतिक कानूनको व्यवस्था गर्नुभएन। यदि त्यहाँ एक भौतिक कानून थियो, यो आत्मा, भगवान को सर्वोच्चता को विरोध, र सृष्टिकर्ता को बुद्धि अपमानजनक हुनेछ। येशू छालहरु मा हिंड्नुभयो, भीडलाई खुवाउनुभयो, बिरामीहरुलाई निको पार्नुभयो, र भौतिक कानूनहरु को प्रत्यक्ष विरोध मा मरेकाहरुलाई उठाउनुभयो। उनको कार्यहरु विज्ञान को प्रदर्शन थियो, भौतिक भावना वा कानून को झूटा दावीहरु लाई पराजित गर्दै।
भगवान, वा राम्रो को विपरीत शक्ति छ भन्ने विश्वास गर्नु भन्दा अरु केहि निराशाजनक छैन, र भगवानले यो बिरोधि शक्ति लाई आफैं, जीवन, स्वास्थ्य, सद्भाव को बिरुद्ध प्रयोग गर्न को लागी शक्ति प्रदान गर्दछ।
सत्यले रोग, पाप र मृत्युलाई नियमन गर्न कुनै कानून बनाउँदैन, किनकि यिनीहरु सत्य को लागी अज्ञात छन् र यथार्थ को रूप मा मान्यता पाउनु हुदैन।
समय नजिक आउँछ जब नश्वर दिमाग आफ्नो भौतिक, संरचनात्मक, र भौतिक आधार त्याग्नेछ, जब अमर मन र यसको गठन विज्ञान मा गिरफ्तार गरिनेछ, र भौतिक विश्वास आध्यात्मिक तथ्यहरु संग हस्तक्षेप गर्दैन। मानिस अविनाशी र शाश्वत छ।
ईश्वरीय चेतना को एक पल, वा जीवन र प्रेम को आध्यात्मिक समझ, अनन्त को एक भविष्यवाणी हो। यो उच्च दृष्टिकोण, प्राप्त र कायम राखीएको जब विज्ञान को बुझिन्छ, आध्यात्मिक रूप मा मृत्यु को अन्तराल लाई बुझ्ने जीवन संग पुल हुनेछ, र मानिस आफ्नो अमरत्व र अनन्त सद्भाव को पूर्ण चेतना मा हुनेछ, जहाँ पाप, रोग, र मृत्यु छन् अज्ञात।
सबैभन्दा राम्रो उपदेश कहिल्यै उपदेश सत्य अभ्यास र पाप, रोग, र मृत्यु को विनाश द्वारा प्रदर्शन गरीएको छ।